MaadaamaLLinux uu badali doono martigelinta goor dhow | Laga soo bilaabo Linux
Maaddaama Linux wax ka beddeleyso martigelinta wax yar
Waan salaamayaa dhamaan asxaabta iyo akhristayaasha bartayada:
Xaalku waa sida soo socota: Maalmo ka hor martigaliyaha websaydhkayaga (a2hoordhin), wuxuu noo soo diray emayl isagoo noo sheegaya in aan ku isticmaalayno kheyraad badan serverka inta aan hada heysano sida ku cad qorshaha qandaraaska Sida muuqata, taasi waa sababta sababta, maalmahan aan kala goynay isku xirnaanta keydka macluumaadka.
Maanta, waxaan helnay emayl kale oo nagu wargalinaya in haddii aanan u cusbooneysiin qorshe sare, ay joojin doonaan koontadayada illaa aan cusbooneysiineyno qandaraaska, waana wax sida iska cad aanan u wada helin. Waad ku mahadsan tahay deeqaha ay isticmaaleyaasha qaarkood na siiyeen, waxaan u oggolaan karnaa nafteenna inaan u beddelo adeeg bixiye leh sharaf badan, ka culus iyo halka ay naga siinayaan taageero ka sii fiican.
Taasi waa sababta maanta, aan horeyba ugu iibsannay gudaha HostGator, halkaas oo aan sidoo kale rajeyneyno inaan ku wareejino domainkeena, kaas oo hadda ka diiwaangashan GoDaddy. Waxaan rajeyneynaa in guuritaanka macluumaadka hal server illaa mid kale, goobta aysan ku dhicin wax dhibco ah ama xog lumis ah. Marka socdaalku guuleysto, waxaan ka dhigi doonnaa qaansheegta iibsiga iyo mid guud.
Waxaan ka cudurdaaraneynaa horay dhibta ay tani kuu keeni karto.
Kooxda Maamulka Linux
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Maaddaama Linux wax ka beddeleyso martigelinta wax yar
in isticmaaleyaasha qaarkood aysan sameyn
Dhibaato waad heli kartaa hadaad dhahdo nacalad
Ma ogtahay sida aad tahay Markaa adigu, halkii aad ka saxi lahayd qaladka, waxaad bilaabeysaa inaad sawirato xirfadahaaga troll.
Khaladka ma saxo haddii aan qaldanahay ama aad i tuurtay.
Way kafiican tahay in laga hortago intaad daaweyn lahayd.
Hagaag, si sax ah maxaa yeelay ka hortagga ayaa ka wanaagsan daawada, waxaad xireysaa afka weyn ee aad heysataa waxaadna u sheegtaa qofka daneynaya si gaar ah.
Nacalad lab ah waxaad u egtahay inaad taabato kubadaha ...
Waxaan diyaar u ahay tabaruceyda, fadlan soo dir xogta si aan u sameeyo ...
Ii qor saaxiib emayl, halkaas ayaan kula xiriirnaa: kzkggaara [at] myopera [dot] com
Gaara my run waa hairosv [at] hotmail [dot] com ii qor maxaa yeelay ma fahmin e-maylkaaga, qalad ayaan ku dhacaa markaan kuu soo qoro ...
Aynu aragno, ha dhigin emaylka @ iyo .com, laakiin ha ku qornaato dhibic iyo dhibic.
Waxaan tifaftiray KZKG ^ Gaara's si aan uga fogaado faafitaanka isla markaana aan ula mid noqon doono Hairosv's
cite = »waxay noo soo dirtay farriin boosta ah oo noogu sheegaysa in aan ku isticmaalayno kheyraad badan serverka inta aan hada heysano sida ku cad qorshaha qandaraaska.»
Waa far weyn, adeegsadayaashu waxay ku tabaruceen, waxaa loo malaynayaa inay jiri doonto "annaga" oo aan ahayn "maya", miyaadan waxba ka ogayn qoraalka?
Haa, waan kaa qoraa si ka wanaagsan adiguna waad ogtahay, laakiin waxa odaygu sheegay ayaa noqon kara marin habaabin
haha, XD maalmo kahor waxaan arkayay waxa martigelinaya si loo isticmaalo, waxaad tihiin khabiiro arimahan ah waana ogahay midka loo adeegsado ragga mahadsanid
Xaqiiqdii ma nihin khubaro, laakiin wax badan ayaan ka aqrinay oo waxaan ka wada hadalnay LiveChat + email dhowr bixiyeyaal, HostGator waa kan ugu fiican ee aan helnay, waxaan rajeynayaa inaynaan khaldamin haha.
Dhammaan boggaga internetka ee aan weydiiyay waxay isku raaceen in HostGator uu yahay midka ugu fiican marti-gelinta adduunka, haddii uusan ugu fiicnayn dhammaan. Haddii aanan isticmaalin, waa sababta oo ah tan martigelin Waqti xaadirkan wax badan ayaa iga raqiisan oo 2 sano kadib wax cabasho ah ma qabo, iyo sababta oo ah ma haysto kaarka amaahda oo inta aan joogo HostGator waa lagama maarmaan in la bixiyo, my martigelin current aniga ima weydiinayo. 😛
Faallo ahaan iyo ujeedo la'aan xayeysiinta XD, waxaad sidoo kale ku bixin kartaa lacagtaada paypal. PayPal uma baahnid kaarka amaahda, kaliya kaarka bangiga deb
Hagaag, waxay ahayd inaan dhaho "kaar" aniga oo aan cadeyn midka, maxaa yeelay waxaan haystaa kaarka debit laakiin ma aha mid shaqeynaya maxaa yeelay waxaan ku leeyahay lacag badan oo bille ah. Way fiicnaan laheyd aniga inaan si dhakhso leh u sii daayo iyada kahor inta uusan booliska ii imaan. 😀
XD, haa, waan ogahay waxa aad u jeedo, XDDDD
By the way bro @Gaara, adigoon ku talo gelin inaad gacantaada rarto, laakiin astaanta qeybinta Mandriva (in kastoo aan isticmaalayo RosaLinux, waxay noqon laheyd hal astaan ​​dheeri ah oo lagu daro: P), kama muuqato dusha sare ee baloogga, hoosta meesha raadinta, laakiin aan lahayn Si kastaba ha noqotee faallooyinka haddii :).
Ma muuqdo boodhka? Laakiin waan sameynay: https://blog.desdelinux.net/wp-content/themes/arras/images/dlinx/distro_icon/mandriva.png
Waa inaad aragtaa UserAgent sida ay tahay ama wax la mid ah 🙁
mmm oo hada maxaa kugu dhacay. maxaa diidaya inay sameeyaan qoraal ay tahay inaan ka fikirno inaynu si wanaagsan u xusho martigelinta 🙂
Waa maxay go'aan fiican! Hostgator waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican (labaad) ee martigelinaya WordPress. Si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talin lahaa inaad ka tagto domainka leh Godaddy.
Oo maxaa halkaa loogu daayay? Inta aan ogahay, GoDaddy wuxuu si cad u taageerayaa SOPA iyo waxaas oo dhan ... oo dhibaato nagu galin kara sax miyaa?
Waqtigiinu waa dhacay. Godaddy wuxuu taageeray SOPA, laakiin inbadan oo ka mid ah macaamiisheeda (oo aad u tiro badan, iyagu waa "diiwaan hayaha ugu weyn" adduunka) waxay bilaabeen inay ku wareejiyaan cinwaannadooda shirkado kale. Marka Godaddy wuxuu qaaday tallaabo dib u dhac wuxuuna si cad ugu dhawaaqay inaysan mar dambe taageeri doonin SOPA. Intii lagu gudajiray mudadii uu taageeradiisu socotay, dhowr shirkadood oo "diiwaangeliyeyaal" Mareykan ah ayaa bilaabay inay bilaabaan dalabyo ku saabsan gudbinta domainka, taas oo isticmaaleyaal badani ay sameeyeen taasna ay ahayd tii "haraati" Godaddy
Si kastaba xaalku ha ahaadee, iyagu waa kuwa ugu fiican ee ku jira: diiwaangelinta domainka, wareejinta iyo maamulka. Kaliya waxaan haystaa mid iyaga la jira, oo gaar ah, oo shirkadayda martigelinta ahi aysan bixin. Laakiin haye, sidoo kale waa run in ay kafiican tahay in waxwalba lawaafajiyo: haddii aad kaliya hal domain leedahay (barta dhibic), waxaad sifiican ula wadaageysaa maamulka shirkada martigalinaysa, kiiskan Hostgator.
Sidoo kale GoDaddy wuu nuugaa. Ma ogeyd sida ugu fudud ee ay mar xatooyada domainka uga xadeen maamulaha Web Masters iyo wadada iskutallaabta ay isaga mariyeen si ay dib ugu helaan? Waxaan sidoo kale leeyahay dad yaqaan oo halkaas ka iibsaday aagag isla markaana dhibaatooyin joogto ah awgood ay ugu dambayn u guureen Magaca. Magac ahaan ma jiraan.
Xaqiiqdii, Anons waxay daabaceen kumanaan lambar sir ah oo u suurtagashay inay soo saaraan GoDaddy: http://www.google.com/#sclient=psy-ab&hl=es&safe=off&site=&ie=ISO-8859-1&source=hp&q=hackean+godaddy&oq=hackean+godaddy&gs_l=hp.3..0l10.12796.15613.1.15867.19.9.0.0.0.0.1601.3067.7-1j1.2.0…0.0…1c.1._nRHQxfZT4E&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=3bfd32a8756ebd9e&biw=1024&bih=633
Weerarkii caanka ahaa ee 10-kii Sebtember, waa maalintii ugu madoobayd taariikhda GoDaddy, hahaha. Tartanku wuxuu u dhacay sida gorgorrada oo kale macaamiishooda oo leh nooc kasta oo dallacsiin ah oo iyaga lala doonayo. Idinkaa runtii nasiibdarro idinkuma qabateen inaad goor hore dhaqaajisaan, maxaa yeelay HostGator wuxuu bixinayay 6 bilood oo qorshe kasta ah 1 dinaar oo ay la socdeen kuubbada 'GODADDYISDOWN', hahaha. xD
Ku fiicnaanshaha isbeddelka HostGator waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan martigelinta adduunka iyo wax kasta oo u roon <Linux soo dhawow xD
Nacalaa oo ilaa maantadan la joogo waxay ii sheegaan sida tabaruca loo sameeyo, waxay umuuqataa inaysan doonayn deeqdayda XD
Haye, maahan inay rabaan tabarucaada. Maskaxda ku hay in nimankani ay leeyihiin noloshooda iyo shaqooyinkooda, inkasta oo ay taasi jirto, waxay qaataan waqti ay ku dhisaan oo ay ku ilaashadaan barta kulanka isbaanishka ee quruxda badan ee ku saabsan agabfudud ee software-ka.
Ku caawi deeqdaada!
ha igu duugin XD
xD Nin iyo Halkan ma haysatid macluumaadka aad u baahan tahay?
Hada nin is deji sifiican u sharax waxaan filayaa XD
maxaa yeelay ma arki karo faallooyinka, kaliya waan akhriyaa maxaa yeelay waxay ku dhacaan iimaylka
Wali miyaad ku jirtaa kuwaas? Ma ahan inay sidaas oo kale sii ahaato 🙂
Hadda haddii aan heli karo Elav faahfaahinta ayaa ah inaanan haysan xisaab paypal XD ama kaarka deynta ah iyo kan aan ku leeyahay deyntaas ma ii oggolaanayso inaan wax kaga iibsado internetka XD si kale, maxaan ku aqaan galbeedka urur shaqaale? yaa mas'uulka ka ah cad in ay si fiican iigu sharxaan IRC
Waxaan durba furay lacag yar isla marka aan aado bangiga si aan dhigto oo aan iyaga ugu siiyo wax ay ku martigeliyaan ama wixii loo baahdo;
Guri baan u baahanahay, ma ii iibsan kartaa aniga?
Maadaama ay tahay waxa loo baahan yahay hahahaha
Qaahira Dock 3 ayaa diyaar ah!